को थिए, ती मुख्य त’स्कर ? जसले असई र जवानको विभ’त्स ह’त्या गर्न लगाए | Govinda BK | Public 24Khabar
Home News को थिए, ती मुख्य त’स्कर ? जसले असई र जवानको विभ’त्स ह’त्या...
थाईल्याण्डका राजा महा भजिरालोंगकोन र उनका नीतिविरुद्ध ठूला ठूला विरोध प्रदर्शनहरु भैरहेका छन । प्रधानमन्त्री प्रयुत चान ओचाले पद छाडेपछि जारी गरिएको आ’पतकाल घो’षणाका कारण थाइल्याण्डमा चार जना भन्दा बढी मानिस भेला हुनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यद्यपी पछिल्ला केही सातादेखि राजतन्त्रविरुद्धको वि’रोध प्रदर्शन चर्किंदै गैरहेको छ ।
प्रदर्शनकारीहरुले राजतन्त्रको पूर्ण रुपमा अन्त्य गरी लोकतन्त्रको स्थापना गर्न माग गरिरहेका छन । को रोना म’हामारीका कारण गरिएको ल कडाउनले थाईल्याण्डको आ’र्थिक अवस्था विग्रंदो अवस्थामा छ ।
अहिले थाई राजा महा भाजिरालोंगकोन आफ्ना ४ जना पत्नी र २० जना शाही सहयोगीहरुसंग आनन्द भोग गरिरहेका छन । थाईल्याण्डमा शाही सहयोगी त्यसलाई भनिन्छ, जो राजाका पत्नी हैनन् तर राजालाई यौ न सु’ख दिन्छन ।
शाही सहयोगी भनिने यो पद सन १९३२ मा हटाइएको थियो । तर वर्तमान राजा महा भाजिरालोंगकोनले शाही सहयोगीको पदलाई पुनः ब्युँताएका हुन ।
थाईल्याण्डका राजा अस्वभाविक कृयाकलापहरुका कारण चर्चामा आइरहन्छन । राजा महा भाजिरालोंगकोनको ‘फुफु’ नाम गरेको कुकुरसंग निकै गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध थियो । उनले एक पटक कुकुर फुफु लाई रोयल थाई एअर फोर्सको एयर चिफ मार्शलको पदमा नियुक्त गरेका थिए । अहिले त्यो भाग्यमानी कुकुरको मृ त्यु भैसकेको छ ।
थाईल्याण्डमा राजाको आ लोचना गर्ने कार्यलाई ठूलो अपराधका रुपमा लिइन्छ । राजाको आ लोचना गर्नेलाई १५ बर्षको जल सजाय दिने क डा का नून छ । तर पनि थाई नागरिकहरु अहिले राजा महा भाजिरालोंगकोन वि*रुद्ध सडकमा उत्रिएका छन । नागरिक खबर बाट साभार।
Previous articleएक सु*इँको २५ करोड ईनै सानू बच्चालाई अ*चम्म छ, अहिले सम्म नसुनेको रो*ग देखियो
Next articleदसैंमा अचा*नक भक्तपुरमा के भयो यस्तो.? प्रेमिकालाई लिएर दुई भारतीयले लिए आफ्नै साथीको ज्या*न